ဂီတ | စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ဂီတ
ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရွေးချယ်ဖို့ကိုဘယ်လို? သင့်ရဲ့ခေါ်ဆိုမှုသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဘို့အသွားရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. ကနေရှေးခယျြဖို့ရွေးချယ်စရာနံပါတ်များရှိပါတယ်. သငျသညျဆေးပညာအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစေနိုင်သည်, ဥပဒ, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, ဘဏ္ဍာရေး, ဒီဇိုင်း, မီဒီယာနှင့်အများအပြားပိုပြီးလယ်ကွင်း. သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလည်းသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာ / ညဥ့်နှင့်သင့်အသက်တာကိုပိုပြီးအရေးကြီးတာကသင်တန်း၏ပိုကောင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်. ထိုကွောငျ့, သင်နှင့်ဘဝကနေသင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များကိုက်ညီမယ့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်ထိုသို့. အလုပ်တစ်ခု Tha Choose ...
ငါအဆသင့်ရဲ့ရောင်းအားတိုးတက်စေနိုင်သည်ကိုတဦးတည်းတစ်ခုတည်းစကားလုံးရှိကွောငျးသငျသညျကိုပြောသည်လျှင်အဘယ်အရာကို? ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောစကားလုံးမသာကသင့်ရဲ့ရောင်းအားကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အင်အားကြီးမားဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်! သငျသညျနောက်ဆုံးတော့သင့်ရဲ့ဖောက်သည်နည်းမှန်လမ်းမှန်စျေးကွက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်!
အဆိုပါတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးသည်လေးမှာ Common Sense သိကောင်းစရာများ
Here'saphone interview tip worth considering: smile. A smile isamagic thing, and in addition to being seen in person it can be felt fromadistance. When doingaphone interview, don't think that because the person on the other end of the phone can't see you that smiling and other positive body gestures are not important. The best interview tip that anyone was ever given was to smile and make positive gestures. တကယ်တော့, many people talk with their hands. သင်ပြုခဲ့လျှင်, consid...
သငျသညျစှနျးငွေရေးကြေးရေးဖြည့်ဆည်းအောင်ဖို့ကြိုးစားနေရဲ့သူတစ်ဦး homemaker ဆိုရင်, ဤနေရာတွင်စဉ်းစားရန်ငါးအိမ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်များမှာ ...
Apple ကတစ်ဦး Intel ကကွန်ပျူတာအောင်
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသိကောင်းစရာများ – ကလေးသူငယ်များကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခုနှစ်တွင်အရေးကြီး – အပိုင်း 1
Market မှာမအောင်မြင်တာနဲ့စီးပွားရေးသံသရာ (အပိုင်း 1)
အောက်ပါက 'စီးပွားရေးသံသရာအရင်းရှင်ဝါဒ၏အရှိဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းမှအရှိဆုံးပြည့်စုံအစဉ်အဆက်ရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်. ဆောင်းပါးမဆိုကောင်းစွာပညာတတ်စာဖတ်သူအားဖြင့်ဖတ်ပါနိုင်စေရန်အလို့ငှာ, ငါဘောဂဗေဒဗန်းစကားလျော့ချခဲ့ကြပြီးစီးပွားရေး၏ဖွဲ့စည်းပုံမှတိုတောင်းတဲ့နဲ့ရိုးရိုးမိတ်ဆက်စကားဆက်ပြောသည်ပါပြီ. တစ်ဦးချင်းစီသည်ကိုတဦးတည်းကျွန်တော်မွကွေီးပျေါမှာပရဒိသုရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်သိရန်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့. အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောနာကျင် Down တို့ကမြို့ကိုဝိုင်းထားကြသည်ဖြစ်ပါတယ် ...
အဆိုပါသက်တော်စောင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတော်လေးကြီးမားတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်, အသက်တော်စောင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ထားတဲ့အတွက်ဆွဲဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အောင်. ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ခြင်း, အသက်တော်စောင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအခြားအလုပ်စက်မှုလုပ်ငန်းထက်လျော့နည်းယှဉ်ပြိုင်သည်နှင့်အလုပ်အကိုင်တစ်ခုအကွာအဝေးကမ်းလှမ်း. အသက်တော်စောင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအခြားအလုပ်စက်မှုလုပ်ငန်းထက်လျော့နည်းယှဉ်ပြိုင်ပေမဲ့, သင်ဆဲအချို့သောအလုပ်သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီရန်လိုအပ်သည်, တစ်ဦးသက်တော်စောင့်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုတင်. အများအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးသက်တော်စောင့်လေ့ကျင့်ရေးက c တက်ရောက်ရန်လိုအပ်ပါသည် ...
မသေချာသော Kiss Card များကိုနောက်ကွယ်မှာအဆိုပါအတ္ထုပ္ပတ္တိ
မသေချာသော Kiss Card များကိုခွေးချစ်သူများအပေါင်းတို့နှင့်အခါသမယများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားကာတွန်း ecards နှင့်နှုတ်ခွန်းဆက်ကတ်များများမှာ. သင်ပေးပို့တိုင်း ecard အတွက်သရုပ်ဆောင်သောခွေးကို select လုပ်ပါနှင့်နာမည်ရ.
မူလစာမျက်နှာရုံးသုံးပရိဘောဂ: အဆိုပါညာ Computer ကို Desk ရွေးချယ်ခြင်း
သင့်အိမ်ရုံးဂရုတစိုက်စီစဉ်ထားရပါမည်, လက်ျာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ရုံးပရိဘောဂသာသငျသညျအခြိနျနှငျ့အားထုတ်မှုမကယ်တင်မည်, ဒါပေမဲ့ပိုက်ဆံ, လွန်း. တစ်ဦးရှုပ်ထွေး Workspace အတွက်ဟောငျးသို့မဟုတ်အဆင်မပြေရုံးပရိဘောဂရလဒ်များကို, ကုန်ထုတ်စွမ်းအားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နောက်ဆုံးမှာနောက်ကျောသို့မဟုတ်လက်ကောက်ဝတ်နာကျင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ဝင်ငွေအဘို့အကိုယ့်ကိုကိုယ်အပေါ်မှီခိုရသောအခါ, သင်သည်သင်၏အပြည့်အဝကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှအလုပ်လုပ်ကြသည်မဟုတ်မည်သည့်အချိန်, သငျသညျပိုက်ဆံဆုံးရှုံးနေကြ. အများဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ comp ကိုအထူးအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့် ...
သင့်ရဲ့ Target ကစျေးရွေးချလာတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးမှထိပ်တန်းဆယ်ပါးမေးခွန်းလွှာ
Target ကစျေးသောသင်သည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုရည်ရွယ်ထားမှအုပ်စုအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်. ပိုပြီးရှင်းလင်းစွာသင်သည်သင်၏ဈေးကွက်သတ်မှတ်နားလည်, ပိုကောင်းသငျအုပျစုကိုတိုက်ရိုက်စျေးကွက်နိုင်. သူတို့ဘာသာစကားစကားပြော, သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေဖြေဆို, နှင့်သင့်ကိုတကယ် '' ရ '' သူတို့နှင့်သူတို့သင်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းပြသ. ဒီနေရာတွင်ပိုကောင်းသင့်ပစ်မှတ်ဈေးကွက် define ကိုကူညီမေးခွန်းအချို့ရှိပါတယ်.
လူ့ဆက်ဆံရေးဆယ်ပညတ်တို့ကိုငါ့အားမူရင်းမဟုတ်, ငါသည်ထိုအရင်းအမြစ်မသိရပါဘူး. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, သငျသညျစီးပွားရေး၌ရှိကြ၏လျှင်သူတို့စတိုင်ထဲကသို့မဟုတ်နေ့စွဲထဲကလိုက်မသွားဘူး. သင့်လုပ်ငန်းအတွက်လူတိုင်းဤပညတ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အားထုတ်မှု imbue ရမယ်. သူတို့ကစျေးကွက်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်ရောင်းချနေခြင်းကိုခံရဆက်ဆံရေးကိုအမျိုးအစားတိုင်းအတွက်လိုအပ်သည်, ရောင်းချခြင်းမပြုမီသို့မဟုတ်အပြီးဖောက်သည်အထောက်အပံ့ပေး, အတူလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်စျေးသည်များသို့မဟုတ်သင့်ထောက်ခံမှုအသင်းနှင့်အတူညှိနှိုင်းနှင့်သင်တန်းပြည်တွင်းရေး ...
သင့်ရဲ့ကြောင်နှင့်အတူနေအိမ်လုပ်ငန်းခွင်မှာ Data ကို Entry '!
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားထားခဲ့ချင် dont, သမျှကိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်. ဒီတစ်ခါလည်းသင်သူမ၏လေးတွေနှင့်အတူအိမ်မှာဖြစ် likes သူတစ်ဦး mom, များမှာ (ဒါမှမဟုတ်အဖေ), ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တို့ရှိသမျှသည်နေ့ကလူပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ခြင်းကိုမုန်း, သို့မဟုတ်သင့်ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွအတွက်အလုပ်လုပ်ချင်, ဒါမှမဟုတ်သင် Alaska မှာနေထိုင်နှင့်ကပဲလွန်းချမ်းအေး freaking ဖြစ်ပါတယ်.
ငွေအွန်လိုင်းမြန် Make လုပ်နည်း
Choosing the right niche market is an easy process. သေး, it must be understood.
ဒါဟာဒစ်ဂျစ်တယ်တော်လှန်ရေးခေတ်ဖြစ်ပါသည်. နီးပါးတိုင်းအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်း Digital ဖြစ်ပါတယ်. သော်လည်းပိုပြီးစျေးကြီး, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းကိရိယာများပိုမိုနှစ်သက်နေသည်, အရည်အသွေးထက်သာလွန်သောကွောငျ့. ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းကိရိယာများရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်အခါ, စဉ်းစားရန်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ကသူတို့ကိုလိုက်လျောညီထွေလိမ့်မည်ဟုဖျော်ဖြေရေးစင်တာ၏သဘောသဘာဝဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးကဒီဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေရေးစင်တာများထဲမှယူနစ်အားလုံးကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းကိရိယာများရတာဟာ. ဒါဟာအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ဂီတဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြု, ရုပ်ရှင်တွေ, ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုကနေတဆင့်တစ်ခုတည်းကိရိယာမှအိမ်ပြန်ဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကို.
အဆိုပါ7အကောင်းဆုံးဂီတ
အတွင်းအာရုံစိုက်ဖို့ကိုဘယ်လို4မှော်ခြေလှမ်းများ
တိုက်ခိုက်ရေးကလေးဘဝအဝလွန်ခြင်းကိုကူညီပါ – တစ်ဦးကလေးကြံ့ခိုင်ရေးစီးပွားရေး Start
Hold Messaging ကိုတွင် | သင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက် Marketing ကိုလက်နက်
Network မှ Marketing ကို Advertising ကြော်ငြာ ‘ ကျနော်တို့မျှော်မှန်းချက်ဖူး
Do you ever watchamovie that you think is excellent and wonder why movies like Titanic are the ones to captivate the attention of the greater public? ကောင်းစွာ, I don't.
အကြှနျုပျ၏ဘိုးဘိုး, တစ်ဦး Quaker သူကိုဖွင့်, ငါစျေးကွက်သို့စွန့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသဘောမတူဖို့အသုံးပြု, ဒါပေမဲ့သူစဉ်းစားတွေးခေါ်ငါ၏လမ်းမှပတ်ပတ်လည်လာမယ့်မယ့်, ပင်များ၏ကြီးကျယ်သောအသက်အရွယ်မှာ 92. သူစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏သံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည် (မိမိအစိတျထဲတှငျ - တစ်ဦးယုံလွယ်သောပါတီထံမှပိုက်ဆံလုပ်ပြီး Extract နှင့်အတူပြောရလျှင်တစ်ဦးသက်တမ်း, ကော်ပိုရိတ်လောဘ၏အကြိုးအတှကျ) နှင့်အမြတ်အစွန်းအတွက်မယုံကြည်ပါဘူး, အမြတ်အစွန်းသူ့ဟာသူဆိုးအရာမဟုတ်ပါဘူးသော်လည်း. အမှု၌သင်တို့ကိုသတိမထားမိခဲ့သောကြောင့်, ငါသညျဤပြဿနာကိုတက်စေ, ဒါကြောင့်မကြာမီခရစ္စမတ်တစ်ဦးဖြစ်မသွားမယ့် ...
တစ်ဦးကအမှတ်တံဆိပ်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် tagline ကျော်လွန်သွား. ဒါဟာတန်ဖိုးပြည့်စုံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသို့မဟုတ်အစုံဖြစ်ပါသည်, တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်ဇာတ်လမ်းလိုင်း, အမြင်အာရုံထပ်ခါတလဲလဲနှင့်အတူ, အာရုံနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဒြပ်စင်. သင်တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်ဖန်တီးခြင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ, သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံရဲ့တန်ဖိုးရှိရကြောင်းသေချာစေရန်ဤအလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာ: 1. ထူးခြားတဲ့ Be. သင်သည်အခြားကုမ္ပဏီ၏ identity ပေါ်ခိုးယူသို့မဟုတ်ထိပါးဖို့ကြိုးစားလျှင်သင်စျေးကြီးဥပဒေရေးရာပူရေ၌သင့်ကုမ္ပဏီဆင်းသက်ပါမယ်. အပြင်ဥပဒေရေးရာထံမှ, သငျသညျ GE လေ့ ...
Las Vegas မှ: မဟုတ်သောလောင်းကစား Related ပျော်စရာဖူးလုပ်နည်း
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအပြေး – သနေတဲ့ Options
How can you profit from the boom in child care services? Here areafew suggestions. 1. Provide Child Care from Your Home Would you like to provide child care services from your own home? ဒါကြောင့် အကယ်., here is some advice obtained from an experienced child care provider: -There may be laws in your area that limit the number of children (other than your own) that you can care for from your home. It could be just five or six children. -Don't do half days. If someone dro...
တစ်ဦးလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်, who are thinking of going into business, or who is already conducting business, you have to start learning about the basic concepts of Accounting because they are the concepts that are used in reporting your business activities to the government come tax time. It is time you must know about one of the most fundamental concepts in accounting.
łoneczko przygrzewa już coraz mocniej. Studio solarium w pobliżu miejsca zamieszkania kusi kolorową reklamą i promocjami. A ty... Zastanawiasz się opalać się czy nie? Moda na opaleniznę przechodziła już r'żne koleje losu. Po okresie olbrzymiej popularności w czasach starożytnych moda ta musiała czekać na sw'j powr't aż do lat 20-tych XX wieku. Coco Chanel spopularyzowała na nowo opaleniznę. Od końca XIX wieku lekarze uznawali dobroczynne działanie słońca (gł'wnie jako czynnik wpływający korzystnie na budowę kości). Promienie UV i powstająca dzięki nim w organizmie witamina D3 sprawiają, że czujemy się zdrowsi, szczęśliwsi, zrelaksowani.
IPhone ကို Nova – IPhone ကို Downloads သောသူသည်သင်၏နံပါတ်တစ်ခုမှာရင်းမြစ်
That'sapopular question. Some people insist you lead with the business (and they tell you to offer the product asalast resort only if the prospect says No to the business); others say they'd rather lead with the product. သို့သော်, there is NO best way for all. Just like there's no product for everyone. Here are five questions to help you decide what YOU should do. သတိရ, you're the one leading, so choose what suits YOU. ထိုအခြင်းမရှိ, it might not be the same way y...
ထိုအစွမ်းထက်၏ profile များကို: Advertising ကြော်ငြာအမှုဆောင်အရာရှိစတိဗ်သောမြက်ပင်
ဒါက Hold Hold…ကျေးဇူးပြု!
ဒါဟာပျက်ကွက်ဘယ်တော့မှ. တစ်ဦးပီဇာမိန့်သို့မဟုတ်ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့ချိန်းဆိုမှုအောင်ရှိမရှိ, ငါကလုနီးပါးအခါတိုင်းနားမထောင်. "ငါကိုင်ပေါ်တွင်သင်ထားနိုင်သလား?", သူတို့ကိုမေး. ငါပင်ဖြေဆိုရန်အခွင့်အလမ်းရှိခင်မှာ ... ငါကိုင်အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကို! ပဲဖြစ်ပျက်? ဒါကြောင့်တစ်ဦးလိုသောဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုခဲ့သည်? အဘယ်ကြောင့်ပင်ငါ့ကို option ကိုပေး? အဘယ်ကြောင့်ရုံမပြော, "XYZ မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်, ကျွန်တော်ချက်ချင်းကိုင်ပေါ်တွင်သင်ထားရှိရာ!".
သူဌေး niche ထိုအတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း
မျက်စိကန်းအစွန်းအကွက် — (သင်သည်သင်၏ကြေးမုံစစ်ဆေးမထားဘူးဆိုရင်, သငျသညျ '' crash တာပေါ့)
တစ်ဦးယာဉ်မောင်းများအတွက်, ကန်းအစက်အပြောက်ကိုအလွယ်တကူမတွေ့မမြင်ဧရိယာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာမှန်လက်လွတ်ဒေသဖြစ်နိုင်သည်, တစ်ခုခုဘေးမှာဒါမှမဟုတ်ယာဉ်မောင်းနောက်ကွယ်မှ ... ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးယာဉ်မောင်းများကမေ့လျော့နေသည်. ယာဉ်မောင်းလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အခြားကားတစ်စီးကိုသူတို့မျက်စိကန်းသောအစက်အပြောက်ရှိသည့်အခါယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွား. လူသားများအဖြစ် (နှင့်အမှုဆောင်အရာရှိ!), ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မျက်စိကန်းသောအစက်အပြောက်များ, ဤမျက်စိကန်းသောအစက်အပြောက်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေ.
3 တိုင်းစီးပွားရေးကိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်ထိရောက်သော Tactics
Deloitte စံချိန်တင်ဘဏ္ဍာရေးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် 2007
သင့်ရဲ့ Intranet outsource? ဒါဟာသင်ကစဉ်းစားပါစေသောသန်းပိုသဘာဝကျပါတယ်.
တစ်ပိုအဖိုးတန် Virtual လက်ထောက်ဖြစ်လာ
သငျသညျခရက်ဒစ်ကတ်များနှင့် ပတ်သက်. သိလိုအရာအားလုံးကို!
Advertising ကြော်ငြာအကြံပြုချက်များသင့်စိတ်ပူဖောင်း Get ရန်
အွန်လိုင်းတစ်ဦးကကုန်ပစ္စည်းသည်အမှတ်တံဆိပ်-အမည် Advertise ပြီးတော့ Build ရန်ကဘယ်လို
သင့်ရဲ့အရောင်း Copy ကူးစမ်းသပ်ဖို့ကိုဘယ်လို
5 သင်၏လုပ်ငန်း Boost တော်မူမည်ဒါကတိုက်ရိုက်အရောင်းအဘို့ပျော်စရာပါတီအားကစားပြိုင်ပွဲ